Ukuphela kweeJamani ezilandelayo: I-Case Nominative
Isalathisi esilandelayo ibonisa ukuphela kwesigqibo sesithintelo sokuqokwa kwamanqaku afanelekileyo ( der, die, das ) kunye namaxwebhu angapheliyo ( ein, eine, keine ).
Icandelo lokuQinisa (iNkundla yesiGaba)
der neu e Wagen
imoto entsha schön e Stadt
kwisixeko esihle Das alt e Auto
imoto endala kufa neu eBücher
imoto entsha eine schön e Stadt
isixeko esihle kwi-alt ngokuzenzekelayo
imoto endala keine neu en Bücher
akukho zincwadi ezintsha
Kwakhona ubone : Ukuphela kweAjective Endings II (Accus./Dative)
Ukuqhubela phambili ukucacisa okwenzekayo apha, jonga kwiimpawu ezimbini zesiJamani ezingezansi. Uyabona ntoni ngegama elithi grau ?
1. I- Das Haus is grau. (Indlu igrey.)
2. I- Das graus Haus istchts. (Indlu ebomvu ikunene.)
Ukuba uphendule ukuba igrau kwisigwebo sokuqala ayinaso siphelo kunye nesigwebo kwisigwebo sesibini sinokuphela, ulungile! Kwimiqathango yograma, ukongezelela ukuphela kwamagama kuthiwa "ukuchithwa" okanye "ukuhla." Xa sibeka iziphelo kumazwi, "sithintela" okanye "siyancipha".
Njengezinto ezininzi zesiJalimane, oku kusetyenziswa kwi- Old English . Igrama yolwimi lwesiJamani namhlanje ifana nesiXhosa saseKhaya (kubandakanya isini ngegama!). Kodwa kwiNgesi yanamhlanje, akukho zihlomelo zezichazi. Unokuqinisekisa oku ukuba ubheka kwiinguqulelo zesiNgesi zezivakalisi ezibini ezidlulileyo malunga nendlu ebomvu. Kwisivakalisi sesi-2, igama lesiJalimane elithi grau linokuphela kwaye igama lesiNgesi elithi "grey" alinasiphelo.
Umbuzo olandelayo onengqiqo kukuba: Kutheni i grau isipheli kwisigwebo esinye kodwa ingesinye? Khangela kwakhona izivakalisi ezibini kwakhona, kwaye mhlawumbi ungabona umehluko omkhulu. Ukuba isichazi ( grau ) siza phambi kwesibizo ( Haus ), sidinga ukuphela. Ukuba kuza emva kwegama kunye nesenzi ( ist ), akufanele kube nokuphela.
Isiphelo esincinci sesipelisi phambi kwesibizo "e" - kodwa kukho ezinye iimeko. Ngezantsi siza kujonga ezinye zezi zinto kunye nemithetho yokuyisebenzisa.
Kodwa okokuqala, kufuneka sikhulume ngeyure enye yegrama: ityala. Khumbula xa utitshala wakho wesiNgesi ezama ukuchaza umahluko phakathi kwamatyala okutyunjwa kunye nenjongo ? Ewe, ukuba uyayiqonda ingqiqo ngesiNgesi, iya kukunceda ngeJamani. Kuyinto elula kakhulu: ukutyunjwa = umxholo, kunye nenjongo = into echanekileyo okanye engachangekanga. Okwangoku, siya kubambelela kumntu olula, ityala lokutyunjwa.
Esi sigwebo "iDas Haus is grau." umxholo nguDas Haus kunye neDas Haus utyunjwa . Kuyafana "neDas graus Haus istchts." Kwizivakalisi zombini, "i-das Haus" isifundo sokutyunjwa. Umgaqo wale nto uyilula: kwimeko yokutyunjwa kunye nenqaku elichanekileyo (i / der, ifa, i-das ) isichazizo siphelo - e xa isichazi siza phambi kwesibizo. Ngoko siza kufumana "Der blau e Wagen ..." (Imoto eluhlaza okwesibhakabhaka ...), "Die klein e Stadt .." (Idolophu encinci ...), okanye "Das schön e Mädchen ..." ( Intombazana enhle ...).
Kodwa ukuba sithi "Das Mädchen ist schön." (Intombazana enhle.) Okanye "Der Wagen is blau." (Imoto ibhakabhaka.), Akukho siphelo nakwi-adjective ( schön okanye blau ) ngenxa yokuba isilathisi sitholakala emva kwesibizo (isichazi-myalezo).
Umgaqo wezichazi kunye nenqaku elichanekileyo ( der , die , das ) okanye oko kuthiwa ngama- der -words ( dieser , jeder , njl.) Kulula, kuba ukuphela kuhlale kukho- e kwimeko yokutyunjwa (ngaphandle kobuninzi ehlala ehlala kuyo yonke imeko!).
Nangona kunjalo, xa isichazamagama sisetyenziswe nge- ein- word ( ein , dein , yesine , njl.), Isichazi kufuneka sibonakalise isini segama elilandelayo. Iimpawu ezichaziweyo - er , - e , ne - es zihambelana namanqaku e- der , afe , kunye neenkcukacha ngokulandelanayo (masc., Fem, kunye neuter). Emva kokuba uqaphele ukulandelana kunye nesivumelwano seeleta r , e , s , der , die , das , kuba nzima nakakhulu kunokuba kubonakale kuqala.
Ukuba kubonakala kunzima kuwe, unokufumana uncedo oluvela kwi-Udo Klinger Deklination von Adjektiven (ngesiJamani kuphela).
Ngokumangalisayo (kwisiNgesi-sikhulumi), abantwana baseJamani bafunda konke oku ngokwemvelo kwinkqubo yokufunda ukuthetha.
Akukho mntu unokuchaza oko! Ngoko, ukuba ufuna ukuthetha isiJamani ubuncinane kunye nomntwana oneminyaka emihlanu e-Austria, eJamani okanye eSwitzerland, kufuneka ukwazi ukusebenzisa le mithetho. Isaziso ndathi "sebenzisa," kungekhona "ukuchaza." Umntwana oneminyaka emihlanu akakwazi ukuchaza imithetho yegrama echaphazelekayo apha, kodwa uyayisebenzisa.
Lo ngumzekelo omhle wokugxininisa kwizikhulumi zesiNgesi ukubaluleka kokufunda ubulili kwezibizo ngesiJamani. Ukuba awukwazi ukuba uHaus akapheli ( das ), ngoko awukwazi ukuthetha (okanye ukubhala) "I-Er hat ein neu es Haus." ("Unendlu entsha.").
Ukuba udinga uncedo kuloo ndawo, jonga iziganeko zethu zobulili ezixubusha ngamacandelo ambalwa kukukunceda ukuba wazi ukuba igama lesiJamani lihlekisiwe, lifa , okanye lide !
IiNkundla zeNkundla zokuTyala
Ishati esilandelayo ibonisa iziphelo zezichaso zamatyala axelisayo kunye namaqhinga amanqaku acacileyo ( der, dem, der ) kunye namaxwebhu angapheliyo ( einen, einem, einer, keinen ). Ukupheliswa kwamatyala okutyunjwa kwakuboniswe ngaphambili kwiphepha elilodwa. Iziphelo zokugqibela zeziganeko zokuhlukumeza zilandela umzekelo ofana nawo.
den neu en Wagen
einen neu en Wagen
I-Case Dative (Into engekho ngqo)
dem nett en Mann
(ukuya) indoda enhle der schön en Frau
(ukuya) kumfazi omhle dem nett en Mädchen
(ukuya) intombazana enhle kunye no- Leute n *
(ukuya) kwabanye abantu
einem nett en Mann
(ukuba) indoda enhle einer schön en Frau
(ukuya) umfazi omhle einem nett en Mädchen
(ukuya) intombazana enhle keinen ander en Leute n *
(ukuba) akukho nawuphi na umntu
Izibizo ezininzi kwi-dative zongeza i--n okanye -kuphela ukuba ifom yefrayim engagqibekanga-(e) n.
QAPHELA : Isiphelo sesiphakamiso kwiNkundla yoBomi iyafana ne-DATIVE - yonke- en !
Uyabona kwakhona : Ukuphela kweeNjongo eziMiselweyo ((ngokutyunjwa)
Njengoko sibonile kwangaphambili kwiphepha elilodwa (Ukutyunjwa), isichazi esilandelayo isibizo kufuneka sibe nesiphelo - ubuncinane- e . Kwakhona, phawula ukuba iziphelo eziboniswe apha kwi- ACCUSATIVE (into echanekileyo) ityala lifana nalabo abakwi-NOMINATIVE (ityala) ityala - ngaphandle kweyodwa ngesini lesini ( der / den ). Ubulili besilisa kuphela yinto ekhangeleka ngayo nayiphi na imeko xa ityala liguquka ukusuka ekutyunjweni ( der ) kwi-accusation ( den ).
Kwisivakalisi esithi "Der blau Wagen isuu," umxholo u- Wagen no der Wagen utyunjwa . Kodwa ukuba sithi "Ich kaufe den blauen Wagen." ("Ndiyithenga imoto eluhlaza okwesibhakabhaka."), Ngoko "der Wagen" utshintshela ku "den Wagen" njengento ephikisayo . Isichasiselo esiphelisa ukulawulwa apha apha: kwimeko yokumangalela ngenqaku elichanekileyo (i- den, i-die, i-das ) isiphelo sesiphelo sisoloko si-fom ifomu. Kodwa ihlala- e yokufa okanye i- das . Ngoko siza kufumana "... den blau en Wagen ..." (... imoto eluhlaza okwesibhakabhaka ...), kodwa "... felela eTür .." (umnyango ohlaza okwesibhakabhaka), okanye ".. .das blau e Buch ... "(incwadi eluhlaza okwesibhakabhaka).
Xa isizaziso sisetyenziswe ngegama elingu- einen ( einen , dein , ineine , njl.), Isiphephelo esichasayo isichazi kufuneka sibonakalise isini kunye nesimo segama elilandelayo. Iziphelo zezivumelwano - en , - e , ne - es zihambelana namanqaku e- den , afe , kwaye adibanise ngokulandelanayo (masc., Fem, kunye neuter). Emva kokuba uqaphele ukuhambelana kunye nesivumelwano seeleta n , e , s kunye ne- die , i- das , yenza inkqubo ilula.
Abafundi abaninzi baseJamani bafumana i- DATIVE (into engacacanga) into eyoyikisayo, kodwa xa ifika kwisichazizwi sokuphela kwesiqhelo, asiyi kuba lula.
Ukuphela ku-ALWAYS - en ! Yiyo leyo! Kwaye le mithetho elula isebenza kwizichazi ezisetyenziswe kunye namaxwebhu achaziweyo okanye angapheliyo (kunye ne- ein -words).
Lo ngumnye umzekeliso wokuba kutheni ukuba ufunde ubulili kwezibizo ngesiJamani . Ukuba awukwazi ukuba uGagen ungumfana ( der ), ngoko awukwazi ukuthetha (okanye ukubhala) "Er hat einen neu en Wagen." ("Unemoto entsha.")
Ixesha elizayo lesiFrentshi
Indlela yokusebenzisa iSpanish Preposition 'Por'
Funda ukungafani phakathi kwe "Sehr" kunye ne "Viel"
Umzekelo Iigama zeliVi
Iintsingiselo ezi-3 ze 'Tras'
Indlela yokudibanisa isenzi "Perdere" ngesiTaliyane
Indlela yokusebenzisa "Unos" kunye ne "Unas" ngeSpanish
Ukufakwa kwe-Adverb ngesiNgesi
Yenza-Yakho: Indlela yokwakha iinjineli zee-Motorcycle
Iziqalo eziPhambili zokuDala
Ngaba Ingqiqo yoBugqiba ngeNkqutyana iya kuba yiNxalenye yeKharityhulam kaZwelonke?
Inombolo yeCalinali yeNombolo - Ukubala
IDamaselic Steel - Inkemba Yabenzi Bamaphulo AseSilamsi
Isingeniso kwi-China Geography Physical
Ukufikeleleka - Ukufikelela, ukufikelela
UPlato no-Aristotle kumaTyhini: ii-Quotes ezikhethiweyo
I-Clarke University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Physics: iFermion Definition
Iikholeji zeeKholeji kunye neeNoveji zokugqibela
Umvuzo omncinci eCanada
Iimpumelelo zikaPhil Mickelson kwiiMidlalo ezinkulu
Ngaba Ndifuna ukugqoka iHlateboard Helmet?
Indlela "uCarmina Burana" kunye namaJamani aseJamani ahlanganiswe ngayo
Uhlolo lokuFunda i-Eggspress
Ingqungquthela yaseMzaneni: Umfana ongumKristu wafa iminyaka emi-3 waza wadibana noThixo ezulwini
Iingcaphuno zikaJoseph Smith: Ukusekwa kweMormonism ngokuKhulelwa kwakhe
Yenza Umbhalo okanye Ubukhulu befonti Kubanzi okanye Kancinci kwisikrini sakho